Itekhnoloji yokuziqhuba yokuHamba eJapan | njl
Ikhaya » njl » Itekhnoloji yokuziqhuba yokuHamba eJapan
Itekhnoloji yokuziqhuba yokuHamba eJapan
Itekhnoloji yokuqhuba ngokwakho ithembisa ukuguqula indlela esivela ngayo ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Inokunciphisa iindleko zokuhamba, inciphise izinga leengozi, kwaye, ngokunokwenzeka, iguqule indlela esicinga ngayo ngobunini bemoto.
NgoJuni, i I-UN ibhengeziwe Isivumelwano phakathi kwamazwe angaphezulu kwamashumi amahlanu sokumisa ngendlela indlela ezilawulwa ngayo izithuthi zolu hlobo. Phakathi kweemfuno kukho ibhokisi emnyama elungiselelwe zonke izithuthi, kunye neNkqubo yokuGcina iMigca yokuziThutha. Oku kuvula indlela 'kwinqanaba 3' lesithuthi esizisebenzelayo, apho umqhubi kufuneka abekhona ukuqhuba kwindawo ezibeka ukhuseleko kwindawo ebalulekileyo. Eli linyathelo elisendleleni eya kwinkululeko epheleleyo; Inqanaba 4 leemoto zezo apho umqhubi engadingi kuqhuba nanini na, kwaye inqanaba 5 leemoto zizimele ngokupheleleyo, kwaye azinawo nolawulo lwencwadi.
Japhan lilizwe elisecaleni lokusika obu buchwephesha.
Umsebenzi omninzi wolingo uya kwenzeka kumaziko esixeko, apho kunokuqokelelwa khona idatha eninzi ngokukhawuleza. Kodwa iidolophu ezikude ngakumbi zinokudlala indima. Kwisithili saseGunma, idolophu yaseNaganohara imiselwe yenza inkonzo yayo yebhasi encinci kunye nokungaqhubi. Iprojekthi iya kuqengqeleka ngaphezulu kweminyaka emihlanu, kwaye ukuvavanywa kuya kwenzeka ebusika, xa urhwebo lwabakhenkethi lungaphandle kwexesha kwaye ibhasi ngokwayo ingenanto. Inkqubo efanayo iyaqhutywa kwisikhululo seenqwelomoya iHaneda, apho Inkonzo yebhasi ezimeleyo iyavavanywa.
Ubungakanani bexesha letekhnoloji yokuqhuba ngaphandle komqhubi lincinci kunokuba abantu banokucinga njalo. Uninzi lwabavelisi lubanga ukuba banenqanaba 4 leemoto ezingahambiyo kumbhobho, zilungele ukuhanjiswa kwii-2020s zakuqala. Ukuthintela intlekele yehlabathi, kunokwenzeka ukuba uninzi lweendlela zehlabathi ziya kuba nokuzimela kwisithuba seminyaka elishumi.
Zeziphi izinto ezifunekayo?
Ewe kunjalo, ukukhula kwetekhnoloji yokuqhuba ayisiyiyo projekthi enye, kodwa uluhlu lonke lwazo, olubandakanya zombini isoftware kunye nezixhobo. Ubuchule bokufunda ngomatshini buya kudlala indima enkulu njengokuveliswa kweetshipsi ezizibambayo.
Itekhnoloji yokuqhuba ngaphandle kokuqhuba, umzekelo, ayinakwenzeka ngaphandle gyroscopes kunye accelerometers - izixhobo ze-elektroniki ezinokuthi zisebenzise ikhompyuter ukuseka apho ikhoyo emhlabeni nangaliphi na ixesha. Kwiiprojekthi zangaphambili, njengendawo yokuhamba emajukujukwini, amaqonga esimbo se-gimbal asetyenzisiwe- kodwa oku akunakwenzeka kwisithuthi sakho. Endaweni yoko, ichaneke kakhulu IMEMS Iichipsi ziya kufuna ukutshintshwa.
Kukwanjalo nangeekhamera ezingabizi kakhulu, eziya kuthi zibekwe kuso sonke isithuthi, usasazo olungenazingcingo, kunye neenkqubo zeGPS. Ukuze imoto engenaqhubi yamkelwe ngokubanzi, kuya kufuneka ukuba ibe nakho ukurhweba kwaye ikhuseleke kwaye isebenze. Indlela eya kwikamva elingenamqhubi ipeyintiwe ngokuya kuncinci kwaye kungabizi mali encinci.